Nchịkọta Mgbasa Ahịa Influencer | Martech Zone
Anyị ekekọrịta infographics on ihe influencer ahịa bụ, nke mmalite nke ahịa influencer tupu, yana ezigbo isiokwu na influencer ahia omume kacha mma, otu esi eji ndị na-eme ihe, na ihe dị iche na Micro na ndị ama ama. Ihe omuma ihe omuma a bu nkowa nke ahia influencer na uzo di ugbua na onu ogugu na uzo.
Ndị folks na SmallBizGenius etinyela ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke na-enye ọnọdụ doro anya nke ịzụ ahịa ahịa taa, N'okpuru Mmetụta: 84 Influencer Marketing Stats. Ọ na-akọwa mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, Youtube mmetụta, mmetụta ịre ahịa ahịa, ọnụọgụ ọnụọgụ, yana otu ụdị ndị ọrụ si arụ ọrụ iji nweta nnukwu nsonaazụ.
Ọ bụ ezie na ịre ahịa influencer abụghị ihe ọhụụ ugbu a, ọ ga-eru ogo ọhụrụ kemgbe afọ iri gara aga. Laa azụ n’oge ahụ, ndị na-eme fim, ndị na-eme egwuregwu, na ndị na-akụ egwú nwere ike ịkpata ezigbo penny site n’ịkwalite ngwaahịa na ọrụ. N'oge ahụ, nke a bụ ụzọ kachasị dị irè iji ruo na ịmetụta ọtụtụ mmadụ. Ma ọ bụghị ọzọ. N'oge a, elekwasị anya agbanweela ndị nkịtị ndị ndị na-ege ntị nwere ike ịkọ. Ọnụọgụ ahịa ndị na-emetụta mmetụta na-egosi anyị etu mmetụta a si emetụta obodo anyị na ihe anyị nwere ike ịtụ anya n'ọdịnihu.
Igodo nke Mgbasa Ozi Mgbanwe
Na 2018, ụlọ ọrụ ndị jiri ahịa influencer nwetara a 520% laghachi na ntinye ego.
49% nke ndị ọrụ na-adabere na influencer ndokwa maka nzụta ha.
Na June 2018, Instagram ruru otu ijeri ndị ọrụ nọ n'ọrụ.
Micro-mmetụta na-erughị 100k na-eso ụzọ na-ahụ maka ọtụtụ posts na n'elu ikpo okwu.
66% nke ndị na-emetụta ihe na weebụ na-elekwasị anya ejiji, ịma mma, ma ọ bụ ibi ndụ.
Nchegbu mbụ maka 42% nke ndị na-ere ahịa na-emeso adịgboroja na-eso ụzọ (bots).
Tags: influencer ahịa roiọnụọgụ mmetụtamicro-influencerLaghachi na Mmetụtalaghachi azụmaahịalaghachi na ntinye ego ahiaROIọnụ ọgụgụ